Yenza i-PDF eneescreen ngoncedo lwe-Automator | Ndisuka mac
Kulabo abangaziyo, i-Automator sisicelo esihlala kwiiMacs zethu kwiinguqulelo zokuqala. Nangona kubasebenzisi be-novice, kunokubonakala ngathi sisicelo esipheleleyo, sinolwazi oluncinci kunye nomfanekiso-ngqondweni, ngokukhawuleza saqala ukusisebenzisa. Isishwankathelo, Isetyenziselwa ukwenza iinkqubo ukuze iMac yethu ibenze ngemizuzwana kwaye kungathatha ixesha ukuba kufuneka siyenze ngeendlela zethu. Namhlanje siza kuyazi indlela yokujoyina iifoto-skrini ezininzi okanye imifanekiso kuxwebhu olunye, kuxwebhu olunye lwePDF ngoncedo lwe-Automator.
Into yokuqala iya kuba kukusebenzisa i-Automator application. Siyifumana kwiLaunchpad, ngaphakathi kwezinye iifolda. Ukuba awufuni ukubuza, unokukhangela ngokukhanya, ungene Automator.
Ixesha lokuqala lokuqhutywa, imenyu ibonakala ibonisa ukuba yeyiphi imisebenzi ofuna ukuyenza, okanye uvule uxwebhu esele lukhona. Siqala nge vula uxwebhu olukhoyo. Lo msebenzi uya kusetyenziswa xa siyile inkqubo kwaye sifuna ukuyisebenzisa kwangoko. Njengoko singenazo iinkqubo ezenziweyo, siza kwenza ezethu.
Cofa apha Ukuhambahamba komsebenzi kwaye emva koko Khetha. Ngoku ujongano oluqhelekileyo lwe-Automator luvula, apho sibona khona iikholamu ezimbini ngasekhohlo kunye nendawo enkulu ngasekunene. Ngoku kufuneka sicofe inkqubo yokuqala kwikholamu yokuqala, eya kuba njalo Iifayile kunye neFolders kwilayibrari esezantsi yemenyu. Kwikholamu yesibini, ukhetho olutsha luya kuvela. Khangela kwaye ukhethe Fumana izinto ezichaziweyo zokufumana. Cofa kuyo kwaye umsebenzi uza kuhamba kwicala lasekunene.
Emva koko buyela kwikholamu yokuqala kwaye ukhangele IiPDF. Xa ucinezelwe, ikholamu yesibini ikhangela I-PDF entsha evela kwimifanekiso kwaye ucinezele kwakhona. Ngoku uya kuba nemisebenzi emibini kwicala lasekunene ebelingenanto ekuqaleni.
Ukuhamba komsebenzi kuyenziwe. Kodwa isetyenziswa njani? Hambisa ii-skrini okanye imifanekiso kuxande lwe Fumana izinto ezichaziweyo zokufumana okanye cinezela ukongeza kwaye ukhethe kubo. Ngoku, khetha kwi I-PDF entsha evela kwimifanekiso ufuna ukuba imifanekiso ibekwe njani. Unokukhetha ubungakanani obukhoyo ngoku, iphepha elipheleleyo, okanye ububanzi ngqo. Khetha umsebenzi owufunayo.
Ekugqibeleni, Cofa ekusebenzeni kwaye ngephanyazo uya kuba nePDF yakho eyenziweyo kwindawo ekhethiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Yenza iPDF ngeescreen ngoncedo loMatshini ozisebenzelayo